Zvipfeko zvakajairika zveEcuadorian, vakapfeka sei? | Kufamba Nhau
Zvakajairika zvipfeko zveecuador
Maria Jose Roldan | | America, tsika nemagariro, Nzvimbo dzekushanya, Ekwadho
Ecuador inyika iri mudunhu reAndean, iri kumusha kune tsika nemagariro akapfuma, ayo anozopedzisira ave kuratidzwa mune zvipfeko zvakajairika izvo zvichiri kushanda mumataundi akati wandei. Unoziva here iyo iyo zvipfeko zvakajairika zveEcuador?
Kana iwo akakura akasiyana echinyakare eEcadorador zvipfeko zvichiongororwa, pamwe inyaya ye zvipfeko zvakajairika mudunhu reOtavalos Zvinoonekwa kushandiswa kwejira rakapamhama rebhuruu rinovhara muviri uye rinosungwa nebhanhire rakarukwa muchiuno, kunze kwemidziyo yakadai seketani dzegoridhe nezvishongo zvinoshandiswa. Iro bvudzi rinogara rakasungwa zvakanaka, kugadzira muswe.
Munharaunda yeAndes ye Saraguro isu tichakwanisa kuwana iko kushandiswa kweponchos, iyo inowanzo kuve nematoni erima nekufungidzira kwevatema, mucherechedzo wesimba, uyo unopesana nekushandiswa kweheti chena uye tambo hombe dzeganda.
Munharaunda yesango reEcuador, kufanana kukuru kunogona kuwanikwa nezviri kune rimwe divi remuganhu nePeru, uko iwe kwaunogona kuona kuvepo kweakashongedzwa mitsipa nekuda kwekushandiswa kweminhengaUye zvakare, iwe unowanzoona loincloths kana madhirezi ane ruzivo rwakanyanya rwuri mumagiraidhi akagadzirwa pairi.
Asi, iwe unoda kuziva zvakawanda nezve zvakajairika zvipfeko zveEcuador? Usarase ruzivo!
1 Zvakajairika zvipfeko zveEcuadorian zvakanyanya zvechinyakare
1.1 Masitaera akasiyanasiyana netsika dzakasiyana
1.2 Vakadzi vemisha yemusara
1.3 Marudzi emvura inonaya mvura yesango yeEcuadorian Amazon
1.4 Taundi reGungwa
1.5 Vanhu veMontubio
2 Kupfeka sei kana iwe uchienda kuEcuador
3 Mapfekero ehunhu muEcuador
3.1 Kana uri murume
3.2 Kana uri mukadzi
4 Maitiro ekupfeka akasarudzika muEcuador
Zvakajairika zvipfeko zveEcuadorian zvakanyanya zvechinyakare
Masitaera akasiyanasiyana netsika dzakasiyana
Iwo akapfekwa echinyakare akapfeka zvipfeko zveEcuadorian achiri akanyanya kufarirwa pakati penzanga yeEcuadorian, muchokwadi kune mamwe marudzi emarudzi ayo achiri kutenga nekutengesa mbatya dzechinyakare kuti azvipfeke nguva dzose. Kune rimwe divi, kune tsika dzakadai se "the colorados" yeSanto Domingo dzakapotsa dzarasa mbatya dzechinyakare., uye chipfeko chemudunhu chinoonekwa chete sekukwezva kwevashanyi. Ecuador inoumbwa nemapoka mazhinji emadzinza ane tsika dzakasiyana netsika, saka hapana chipfeko chiri chenyika uye chakasarudzika muEcuador.
Somuenzaniso, jasi rechinyakare renharaunda yeOtavalos ingangove iri inonyanya kuzivikanwa uye inowanzoitika muEcuador. Munharaunda dzinoverengeka mumakomo vanochengetedza tsika dzakawanda nehembe dzavo, dzakadai seheti dzakasiyana, maponi kana mabhurauzi akavezwa ayo anowanzo shandiswa nevanhu vazhinji veEcuador.
Vakadzi vemisha yemusara
Vakadzi vanobva kumaguta akasiyana siyana ari muSerra vanopfeka masiketi akapetwa mumavara akajeka ane machira ari pamahedhi. Asi nharaunda, dzichisiyana zvakadaro, dzinogona kuve nemisiyano yadzo mune zvipfeko kana ngowani. Vakadzi vanowanzo pfeka shawl reshinda senzira yekutakura kutenga kana vacheche kumusana kwemukadzi.
Marudzi emvura inonaya mvura yesango yeEcuadorian Amazon
Marudzi akasiyana siyana anobva kunharaunda inonaya mvura yesango yeEcuadorian Amazon vachiri kupfeka echinyakare vane misoro yemisoro uye zvimwe zvishongedzo zvine dzinza kana dzinza zvinoreva. Kunyangwe vazhinji nhengo diki dzemadzinza aya vachigona kusanganisa kana kutsiva zvipfeko izvi zvekupfeka nezvimwe zvechimiro chekumadokero.
Guta reGungwa riri pakati pemakomo negungwa, rakarasa tsika nemagariro mazhinji. Hembe yavo yechinyakare mune dzakawanda kesi haina kunyanya kusiyana nehembe dzevanhu vemakomo. Kunyangwe paine nharaunda kumahombekombe dzisina zvipfeko zvechinyakare.
Mutaundi reMontubio (rinofukidza mapurovhinzi eManabí, Los Ríos, Guayas neSanta Elena) vanomira neheti dzavo (cowboy maitiro) uye vanowanzotakura mapangaIvo vanopfeka bhutsu dzerabha asi havana chipfeko chetsika chakabatana navo.
Asi sezvo paine nharaunda dzakasiyana siyana, hapana zvipfeko zvechinyakare zvinoenderana neEcuador yese.
Kupfeka sei kana iwe uchienda kuEcuador
Izvo zvipfeko zvakasarudzika zveEcuadorian zvinowanzo kuve chiratidzo chedunhu kwavanobva. Semuenzaniso, varume vakapfeka ponchos yebhuruu, bhuru-rakareba mhuru, uye ngowani vangangove vanobva kunzvimbo yeQuito.. Mumwe muenzaniso ndevakadzi veAndes avo vanowanzo pfeka mabhurauzi machena, mashagi ane mavara uye capes yegoridhe uye zvishongo zvekorari zvitsvuku. Vashanyi vanoenda kuEcuador sevashanyi vasingatarisirwe kupfeka idzi dzechinyakare, asi iwe unogona. Kana iwe ukafunga kupfeka maitiro avanozviita iwe, iwe uchaonekwa seanokosha munhu nekupa kukosha kune urwu rudzi rwehembe.
Mapfekero ehunhu muEcuador
Kupfeka zvine mutsindo muEcuador uye kuti iwe unogona kuenda zvinoenderana nembatya dzenyika iwe unogona kutevedzera anotevera matipi:
Kana uri murume
Pfeka sutu yakasviba uye tai yemisangano yebhizinesi.
Pfeka mabhurugwa uye zvisungo kana uchizoenda kunoshanda kukambani yeEcuador.
Pfeka hembe dzakabatanidzwa uye dzivirira ngowani mumaresitorendi kana mudzimba dzemhuri.
Kana uri mukadzi
Pfeka mabhurauzi, masokisi uye zvitsitsinho zvakakwirira pamwe nesiketi kana bhurugwa uye unofanirwa kuenda kumusangano webhizinesi kana webasa.
Chipfeko chinofanirwa kuve chinochengetedza saka hachigone kuomesa zvakanyanya kana kudzika zvakaderera. Masiketi anogona kunge asiri mapfupi kana anokanganisa.
Unogona kupfeka jira rakareruka, siketi kana bhurugwa kuti unodya kunze kana kushanyira mumwe munhu kumba. Cocktail madhirezi anoshandirawo zviitiko zvepamutemo, kunyangwe madhirezi akacheka-pasi akafinyiswa.
Maitiro ekupfeka akasarudzika muEcuador
Kuti vapfeke zvisina kujairika, vese varume nevakadzi vanofanirwa kupfeka mateki, mbatya dzemitambo, mabhutsu ekukwira ... izvi zvevhiki zvakanaka. Ivo vanogona zvakare kupfeka sweatshirt kana sweat bhurukwa pakupera kwevhiki.
Imwe pfungwa ndeyekupfeka majini akasununguka, hembe, kana mabhurauzi kushanyira nzvimbo dzeruzhinji. Yekuchengetedza swimsuits, zvikabudura uye mafiripi-flops anofanirwa kupfekwa pamhenderekedzo nedziva.
Iyi ingori mienzaniso mishoma yeiyo zvipfeko zvakajairika zveEcuador uye yazvino zvipfeko zvakajairika izvo zvakanaka kuti iwe unoziva kana iwe uchida kuenda kuEcuador uye kupfeka zvinoenderana nenzvimbo. Kunyangwe ini ndichikukurudzira kuti uzvizivise iwe pachako zvichienderana nenzvimbo yaunoda kuenda kuti ugone kuziva kuti ndeupi rudzi rwehembe dzakapfeka idzo dzavanowanzo pfeka uye nekudaro kwete kubva mutune kana iwe uchida kutsvaga mbatya zvinoenderana netsika dzavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » tsika nemagariro » Zvakajairika zvipfeko zveecuador
Isabel Sisimit Esquit akadaro
Zvakanyanya maererano naPatricia Lurssen, mufananidzo wevechidiki vakapfeka bhurukwa rine mitsetse mitsvuku ndiyo inoshandiswa nevarume muDhipatimendi reHuehuetenango kuGuatemala. Ive nekuchenjerera nemifananidzo nekuti inogadzira nyonganiso.
Pindura kuna Isabel Sisimit Esquit
8 nzvimbo munzvimbo dzinorambidzwa vakadzi
Ndezvipi zvakachipa kushanyira akanakisa mahombekombe munyika?